Lacag maku qaadan lahayd naas-nuujinta canuggaaga? - BBC News Somali
Image caption Fiona Sutcliffe, waxay ka mid ahayd dumarka ka qeybgalay cilmi baaridda
In hooyooyiinka la siiyo lacag ay ku soo tukaameystaan waxay dhiiragelineysaa in ay si wanaagsan u nuujiyaan caruurtooda, sida lagu ogaaday cilmi baarid lagu daabacay JAMA Pediatrics.
Illaa 10 kun oo hooyooyin ayaa lagu sameeyay cilmi baaarista, qaar ka mid ah ayaa loo qoray mushaar gaaraya ku dhowaad $300 oo dollar oo dhiirigalin ah.
Dumarkaasi mushaarka la siinayay, oo si wanaagsan aan u nuujin jirin caruurtooda, ayaa billaabay in ay sare u qaadaan ayna badiyaan xilliga ay caruurtooda la qaataan iyo nuujinta.
Dumarka ayaa dareemay dhiiragelin iyo in ay xiriir wanaagsan leeyihiin, sida lagu qoray warbixinta la soo saaray.
Waxay lacagtaasi u adeegsadeen in ay ku iibsadaan raashiin, alaabta guryaha, midda caruurta, dhar, buugaag, oo ay ka soo iibsadeen suuqyada waawayn iyo meelo kale.
Fiona Sutcliffe, oo 29-jir ah, waxay ka qeybgashay barnaamijka cilmi baaridda.
Markii ay uurka lahayd waxay ku fikireysay in gabadheeda si wanaagsan ay u nuujiso, balse umusha ka dib way ka xanaaqi jirtay: "Waxaa jirto marar kala duwan oo aan ka fikiray caqabadda arrintan oo xaqiiqdii aan la dhibtoonayay," ayey tiri.
Fiona waxay sheegtay in lacagtaasi ay ka heshay dhiiragelin ah in gabadha ay nuujiso ayna muddo sidaasi ku waddo.
"Barnaamijkan waa mid ku wanaagsan in uu sii socdo - Waa dhiiragelin in la sii wado, halkii la quusan lahaa oo caruurta masaasad lala aadi lahaa".
"Waxay ku siineysaa guul, ku sii socoshaha dhibaatada iyo waxay gacan kaa siineysaa in aad dib u billowdo naas-nuujinta."
Fiona iyo saygeeda waxay lacagta ku qarashgareeyeen hadiyado ay siiyeen gabadhooda.
Dalka Britain oo tusaale loo soo qaatay, waxaa la sheegay in uu ka mid yahay wadammada ugu hooseeya, marka laga hadlayo naas-nuujinta. Boqolkiiba 12 caruurta waxaa caano la siiyaa marka ay lix isbuuc gaaraan.
Mid ka mid ah cilmi baarayaasha, Mary Renfrew, oo ka socota jaamacadda Dundee, ayaa sheegtay: "Aad ayey u adag tahay in dumarka ay caruurta nuujiyaan ayagoon haysan qoys iyo bulsho adag oo taageeraya, taasina waxaa ugu wacan caqabadaha bulshada haysta."
Waxay intaa ku dartay, in dumarka qaar ay la tacaalayaan dhibaatooyiinka ka soo wajaha shacabka marka ay naas nuujinayaan, waxaana jiro "Suuqgeyn marin habaabin baahday ah oo dheheysa 'caanaha waxay u dhigmaan naas-nuujinta".
Abigail Wood oo ka tirsan mashruuca dhalashada caruurta ee UK ayaa tilmaamtay in muhiim ay tahay in dumarka la dareensiiyo in la taageerayo ee aan lagu cadaadineyn naas-nuujinta canugga.
"Waxaan ognahay in dumar badan ay doonayaan in canuggooda nuujiyaan, laakiin badankooda ma helaan macluumaadka iyo taageerada ficilka ah ee ay u baahan yihiin."
Wasaaradda tareenka ee Hindiya oo lagu bogaadiyay baahitirta canug yar